Duufaan siyaasadeed oo ka dhacday Hindiya ka dib markii ay muujinaysay "World" deymaha canshuurta oo laga saaray France - TELES RELAY
ACCUEIL » International Duufaan siyaasadeed oo ka dhacday Hindiya ka dib markii ay muujinaysay "World" deyn canshuureed oo laga saaray France
Wadaxaajoodka iibinta duulimaadka Rafale, mas'uuliyiinta canshuurta Faransiisku waxay caddeeyeen 143,7 million euros oo canshuur laga soo iibsaday ganacsade Indian ah oo u dhowaa ra'iisul wasaaraha.
Par Julien Bouissou Ku qor maanta 20h31
Warshadaha Hindiya Anil Ambani, Bishii Sebtembar 2012. Daanishka Siddiqui / REUTERS
Xisbiga Congresska ayaan wakhti lumin. Saddex saacadood ka dib daabacaadda muujinta ee adduunka on the cancelation, by France, 143,7 malaayiin euro oo deynta canshuurta ah lammaane warshadaha Indian in Jouse banda, marka baayacmushtari iibinta Rafale 36 2015, mucaaradka abaabulay shir jaraa'id Sabtidii 13 April ilaa maantadan-bartamihii.
Maalintii saddexaad ee xilligii doorashadii Hindiya ee ku egtahay May 19, maqaalkani waxa uu ka yimid wadnaha duufaan siyaasadeed. Afhayeenka Golaha Shacabka Randeep Singh Surjewala ayaa ku sawiray sawir qaade horay u ah kamaradaha: "Qof kasta oo haysta barakada Modi [Ra'iisul-wasaaraha Hindiya] wuxuu heli karaa waxa ay doonayaan. Marka Modi uu halkaan joogo, wax walba waa suurtagal. " Saxafiga ayaa goobta joogay wuxuu weydiistay haddii warbaahinta Faransiisku aysan ku wargelin wararka been-abuurka ah si ay u tarxiilaan muuqaalka Mr Modi.
Xisbiga Congresska wuxuu ku eedeeyaa Mudane Modi inuu kufsaday Anil Ambani, oo ah saaxiibka Hindiya ee Diyaarada Dassault, heshiiska 36 Rafale iibsaday bishii September 2016 ee 7,9 bilyan euro. Sabtidii, Rahul Gandhi, madaxweynaha xisbiga, ayaa ku celiyay doorashadii madaxweynenimada ee Hindiya "Stole 300 bilyan oo dollar (3,8 bilyan euro) si loogu siiyo saaxiibkiisa tuugta", isagoo intaa ku daray in Mr. Modi uu hareereeyay a "Koox ka mid ah saaxiibada tuugada". Narendra Modi ayaa muddo bilo ah lagu soo eedeeyay mucaaradka ah in ay yihiin kaliya dhexdhexaad oo ah Anil Ambani. Kadibna Xisbiga Xisbigu wuxuu dib ugu soo laabtay murankan. "Inkastoo xukuumaddaani ay diidday in ay tirtirto deyn-bixiyayaasha iyo ardayda ku jira xaalad xasaasi ah iyo is-dilid, waxay fududeeysaa in la tirtiro deymaha shirkadaha waaweyn", Dacwad soo oogay D. Raja, oo ka mid ah hoggaamiyayaasheeda.
Taageerayaasha Modi ee ka xishoonaya
Taageerayaasha Mudane Modi, haddana si deg-deg ah oo ay uga falceliyaan oo ay u bilaabaan dembiyo ku saabsan warbaahinta bulshada, ayaa ka xishoon. Haddii uu weeraro? Tani waxay noqon laheyd inay aqoonsato ku lug lahaanshaha Mr Modi kiis kaas oo si toos ah uga welwelsan kaliya Faransiiska Faransiiska, Dassault iyo Anil Ambani. Qaar ka mid ah dadka isticmaala warbaahinta bulshada ayaa si kastaba ha ahaatee lagu eedeeyay aduunka in uu ahaa "Lacag" by Congress Party Walaac wayn ayaa ka muuqatay jawaabtii Wasaaradda Difaaca ee Hindiya. Dabadeed ayaa soo saartay qoraal ku saabsan Sabtida galabtii, kaas oo uu sharxayaa "Xiriir kasta oo ka dhexeeya mushkiladda canshuurta iyo mawduuca Rafale waa isku day lagu doonayo in si qaldan loo isticmaalo, garsoore, xaasidnimo iyo qalad". Maxaa sababa maalin kasta Telegraph ayaa in la yaabiyo arinkan "Sheeko xiiso leh", illaa iyo hadda "Qofna kuma eedeynin Wasaaradda Difaaca".
Afhayeenka xisbiga Congress ayaa fursad u helay inuu sharaxo in Wasaaradda Gaashaandhiga ee Hindiya ay noqoto tan "Afhayeenka rasmiga ah ee ganacsiga weyn". Astaanta shabakadaha bulshada Dhruv Rathee, oo ay ku xigto 1,8 million macaamiisha on Youtube, ayaa u heellan fiidiyoow kiiskan.
Dhiniciisa, Kooxda Isgaadhsiinta Xiriirku waxay soo saareen qoraal ku saabsan Sabtida oo ay sharaxday in canshuuraha ay sheegteen mas'uuliyiinta canshuur celinta Faransiiska "Wax aan macquul aheyn oo sharci darro ah" waxayna ku doodeen wax kasta oo xaqiiqo ah ee heshiiska canshuurta ee ay heshay. Mudane Modi ma uusan fal celin waxyaabihii ka soo baxay World. Intii lagu guda jiray booqashada Karnataka sabtidii, waxa uu ugu yeeray xukuumadda gobolka Koonfurta Hindiya, oo ay ka mid tahay Congress-ka "Dawladda 20 ee 30%", iyada oo la tixraacayo dhaqanka soo noqnoqda.
Akhri sahanka: Sidee Faransiisku u cadeeyay deynta canshuurta ee Iskaashatada warshadaha ee Hindida Dassault
Julien Bouissou (New Delhi, correspondence)
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/14/tempete-politique-en-inde-apres-les-revelations-du-monde-sur-la-dette-fiscale-effacee-par-la-france_5450100_3210.html?xtmc=france&xtcr=1